InfluencerActive: Tsvaga B2B Influencers Nyore Kune Yako Inotevera Kufuridzira Kushambadzira Campaign | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 19, 2021 NeChishanu, Kurume 19, 2021 Douglas Karr
Nhasi, ndakabatana pamusoro pevamwe 100 B2B vanokurudzira mukutanga kwe Kufuridzira Anoshanda. Iyi ndiyo yekutanga B2B influencer yedhijitari pamusika weB2B kana B2C mabhigi ekutsvaga nekuhaya vanokurudzira zvakananga. Iyo yepasirese-inozvishandira inokanganisa misika yakasarudzika nekuti inobatanidza vatengesi vemakambani neakagundiswa vanokurudzira avo vakavaka yakakosha inotevera uye mukurumbira unovimbika pane dzakasiyana nzira. Iyo kambani yakavambwa na Anthony James ("AJ"), ane makore anoda kusvika makumi matatu ekushambadzira ruzivo uye ari iye anozivikanwa anokurudzira ane zvinopfuura Mamiriyoni maviri evateveri paLinkedIn.
Kutsvaga Vanopesvedzera Kunonetsa
Kune vashambadziri vepasirese, kutsvaga akakodzera kukurudzira kusimudzira iyo mhando uye kubhadhara iyo premium yavanoda kwagara kuri nyaya mukukurudzira kushambadzira, kunyanya kune maSMB. Zvakare, zvigadzirwa zveB2B zvakaganhurirwa mukubaya mukushambadzira kwekusimudzira uye kazhinji vanovimba nezvinotsigirwa zvinyorwa kana kushambadzira, izvo zvinogona kudhura uye kusashanda. Inokosha yekushandisa kukura inofungidzirwa mukushambadzira kwekushambadzira, asi kutsvaga kwakakodzera vanokanganisa kunogona kuve kwakaomera mabhizinesi.
Influencer Inoshanda inogona kubatsira kutyaira kukanganisa nekukupa iwe pamusika musika wevateveri vanokurudzira vanogona kusefetwa nyore. Ipuratifomu:
Inopa zvese mbiri yeanosimudzira pamwe nezvipo zvavo - nemitengo iri pachena.
Vanokurudzira vanogona kupa zvipo zvinosanganisira kutaura, kuratidzira chaiko, zvemukati zvekushambadzira kuedza, kusimudzira midhiya yenhau, kana chero chinhu chavanofanira kupa.
Inorerutsa maitiro evashambadzi veB2B kuti vawane iwo akakodzera kukurudzira muindasitiri yekumira kurudyi nenzira inodhura inoshanda yekutsigira kwavo kutungamira-gen uye mushandirapamwe wekuzivisa mhando.
Demokorasi kuwana mukana kune vanokurudzira uye inopa nzira yakasarudzika yekuwana nekuita navo munyika gumi neimwe, US, Asia-Pacific, uye Europe. Iyo inopa yakasanganiswa yekutanga-chikamu kusvika kwevanhu makumi matatu + nemamiriyoni kusvika pamamirioni zana nemakumi mashanu emamiriyoni evanhu - nhamba dziri kukura zuva nezuva.
Inopa kutaurirana kwakanangana kubva kumushambadzi kune wega kukurudzira uye maitiro akareruka ekuvabatanidza mumushandirapamwe wekushambadzira kuti vawedzere kukanganisa.
Inopa nzvimbo nyowani yekukura yeiyo MarTech indasitiri nekubatanidza bhizinesi (B2B) vanokurudzira nevatengi veB2B. Munguva yakapfuura, B2B vanokurudzira havana kukwanisa kushambadzira ma network avo nekuda kwezvirambidzo zveLinkedIn, uye nzira chete iyo munhu anokanganisa anogona kuwana simba kunze kweLinkedIn iri kuburikidza nezvipo zviripo senge zvirongwa zveInMail. Sponsored posts paLI anodhura uye haashande.
Zvakanakisisa pane zvese, hapana mari yekunyorera kana kudiwa kutumira mamifupi akaongororwa nemurevereri. Kubata kwakananga pakati pebhizinesi neanokurudzira, uye kune mutengo chete kana munhu anokurudzira achibvuma kuita.
Wona Mbiri Yangu Uye Zvipiro paInfluencerActive
Tags: b2b influencer dhatabhesib2b kukurudzira musikab2b vanokurudziratsvaga b2b vanokurudziratsvaga vanokurudzirainfluencer dhatabhesinemusic